SOS Covid-19: MKL hooyadeed oo ka socota bulshada rayidka ah iyo u dooda dadka, iyada oo loo marayo KongoLisolo, wuxuu qaylinayaa qaylodhaan "Walaalaha Madowga / Gabdhaha Madoow iyo Afrikaanka ah, gaar ahaan kuwa reer Kongo, sababta oo ah viruska Corona, Mama MKL waxay si gaar ah kuugu soo dirtaa digniin si aad u dhageysato oo gabi ahaanba gudaha u gasho" ... (VIDEO)
Wajahay Civid-19, waxaad naftaada ka heli doontaa inta u dhexeysa dubbe iyo fal ee hoggaamiyeyaashaada aawadood. Waxaan sameyn doonaa:
Wuxuu sameeyaa khudbado qurux badan oo Faransiis ah markii dalkaagu aan Faransiis ahayn;
Waxay gudbisaa tillaabooyinka la doonayo in lagu fiirsado markii aysan laheyn istiraatiijiyad ama rabitaan ay ku helaan habka;
Weydiiso inaad si joogto ah u maydho goorta badankood aysan xitaa helin biyo. Biyo noocee ah ayaad ku dhaqeysaa? Dhammaantiin ma waxaad tegi doontaan Webiga Kongo? Uma maleynayo sidaas;
Tukada de guriga joog guriga halka 98% reer Kongo ay ku nool yihiin "heerka maalinlaha ah". Maxaad cuni doontaa intaad xabsiga ku jirto saaxiibbada guriga? Kaliya 2% dadka reer Kongo ayaa leh waddo ay ugu baxaan si ay sahay uga helaan suuqyada waaweyn.
aad ayaa sheegay in Soo sheeg wixii xaalad ah ee looga shakiyo fayraska Corona una gudbi xarumaha caafimaad ee ku habboon. Laakiin waa kuwee xarumaha caafimaadka? Miyaa laguu sheegay meesha saxda ah ama isbitaalkee aad u tegi lahayd daweynta fayraska Corona?iwm.
Qaar badan oo ka mid ah kuwa shaqeeya, mushaharkoodu uma oggolaanayo inay sameeyaan xitaa dhammaadka bisha. Gaajada iyo xaaladaha bulsheed ee liita ayaa qiyaasi doona dadka reer Kongo xitaa ka hor inta aanu fayraska Corona. Waxaas oo dhan waxaa ugu wacan dabaqad siyaasadeed oo aan lahayn mas'uuliyad iyo hoggaan, oo naftooda u huraya dadkooda. Hadana dadka reer Kongo waxay wax kasta siiyeen hogaamiyayaashooda.
Waa farriin ka badan rafcaan qaadashada, maahan inaad dhahdo badbaadinta, Hooyo MKL waran. Dhageysi wacan!
Aad bay uga xuntahay in Félix Tshisekedi uu qirayo in dadkiisu ay yihiin doofaarradii adduunka, taas oo ah, waxaan tijaabin doonnaa tallaallada kuwaas oo cawaaqibkooda, dhaqso ama waqti dambe, uu ku dhammaan doono haddii aan tirtirin dadka reer Kongo ama ugu yaraan murugooda: "Inkaaru ha ku dhacdo Felix Tshisekedi iyo farcankiisii ​​oo dhan "Ka wanaagsan shaydaan la yaqaan (Kabila) oo ah malag aan la aqoon (Tshisekedi)